Wararka Dibadda Archives - Ceelhuur Online
Home > Archive by Category Wararka Dibadda
July 2, 2022 July 2, 2022 admin3058Leave a Comment on Hoggaamiyihii Taliban ee loo haystay inuu ‘mar hore dhintay’ oo khudbad jeediyay
November 3, 2021 admin200
Safaaradda Dowladda Mareykanka ee Dalka Itoobiya ayaa Qoraal ay soo saartay waxa ay digniin u jeedisay muwaadiniinteeda Dalkaasi ku nool oo ah inay yareeyaan isu socodka iyo dhaq dhaqaaqa magaalooyinka dalka Itoobiya. War-saxaafadeedka ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa lagu xusay in xaaladda amaan ee dalka Ethiopia ay […]
November 2, 2021 admin230
Dawlad deegaanka Oromiya ayaa ugu baaqay dhammaan madaxda dawlad deegaankaas inay si hagar la’aan ah u hoggaamiyaan halganka oo ay u huraan “wax kasta oo lagama maarmaan u ah guusha”. Waxay sidoo kale ugu baaqeen dhallinyarada iyo sida oo kale dhammaan shacabka deegaanku inay feejignaadaan oo ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada. Wasiirka isgaarsiinta […]
Mareykanka ayaa sheegay in askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya, taas oo ay horay u beenisay xukuumadda Federaalka. Ilhaan Cumar, oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka ayaa weydiisay Robert F. Godec, oo ah sii hayaha ku xigeenka xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka, waxa ka jira ku […]
June 7, 2021 admin655
Hoggaamiyaha kooxda Boko Haram Abubakar Shekau ayaa is-dilay kadib dagaal uu la galay dagaal-yahanada kooxda Daacish ee Gobolka Galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo (ISWAP), sida laga ogaaday cod la duubay oo Axaddii ay wakaaladda wararka AFP ka heshay kooxda. Dhimashadiisa ayaa ka dhiggan is-beddel weyn oo ku yimid dagaalka 12 sano jirsaday ee Nigeria […]
November 28, 2020 admin714
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta Magaalada Makelle ee caasimadda Ismaamulka Tigree kadib dagaal iyo duqeyn culus oo maanta ku bilaabatay Magaaladaasi. Taliyaha Ciidamada Itoobiya General Berhanu Jula ayaa sheegay in Ciidamada Dawlada ay caawa la wareegeen gacanta ku haynta magaalo madaxda gobolka Tigray ee Makelle . War qoraal […]
November 28, 2020 admin757
Iiran ayaa wacad ku martay inay ka aargoosan doonto kuwii ka dambeeyay dilkii loo geystay Seynisyahankoodii ugu sareeyay ee dhanka Niyukleerka, Mohsen Fakhrizadeh, oo shalay la dilay. Seynisyahankani barnaamijka Niyukleerka Iiraan Mohsen Fakhrizadeh ayaa lagu khaarajiyay meel u dhaw caasiamda Tehran, waxaa sidaasi sheegay wasiirka gaashaandhiga Iran. Fakhrizadeh ayaa dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi ugu […]
November 28, 2020 admin570
Magaalada Muqdisho ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa soo gaaray wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu hoggaaminayay Sii-hayaha Xoghayaha Difaaca Mareykanka, iyagoona lagu soo dhaweeyay Caasimadda dalka. Sii-hayaha Xoghayaha Difaaca Mareykanka Christopher Miller oo saacado kooban ku sugnaa Muqdisho ayaa kulan gaar ah Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kula qaatay xubno ka mida ah Ciidamada […]
September 16, 2020 September 16, 2020 admin1216
Sida la wada og yahay bilowgii sannadihii 1990-naadii Caalamka Isaamka waxaa ka kacay maayado xagjirnimo ah kuwaas oo sheegtay in ay higsanayaan dhisidda dawlad muslin ah oo la gu hirgaliyo Shareecada. In kasta oo xagjirnimada diin-siyaasadeed ay soo jirtay ilaa lixdanaadkii qarnigii tagay, kacdoonkan dambe wax uu ka soo shidaal qaatay Kacaankii Khumeyni iyo jihaadkii […]
September 12, 2020 admin498
Baxreyn ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee Carbeed ee oggolaada in la hagaajiyo xiriirkeeda dublumaasiyadeed ee Israel iyadoo ay tani qeyb ka tahay cadaadiska ballaaran ee dublomaasiyadeed ee Madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisu ay ku doonayaan in si buuxda Israel ay qeyb uga noqoto gobolka Bariga Dhexe. Trump ayaa Jimcihii ku dhawaaqay heshiiskan, ka dib […]